အမှတ်ရစရာ အင်တာဗျူးပွဲလေးတစ်ခု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » အမှတ်ရစရာ အင်တာဗျူးပွဲလေးတစ်ခု
Posted by who who on Dec 6, 2010 in Buddhism, Creative Writing, Interviews & Profiles, Think Tank | 12 comments
ဒီနေ့တော့ ကျနော့ခန္ဓာအိမ် ခန်းမထဲမှာ အင်တာဗျူးပွဲလေး တစ်ခု လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်မယ့်အချိန်က နံက် (၁၀)နာရီ တိတိမှာပါ။ အင်တာဗျူး အစီအစဉ်အရ စိတ်ကလေးကို အင်တာဗျူးလုပ်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်က အင်တာဗျူးမယ့်သူ ဆိုတော့ ကြိုရောက်နေနှင့်တာပေါ့။ အင်း (၁၀) နာရီ ထိုးပြီး ငါးမိနစ်လောက်ကျမှ စိတ်ကလေးက ခန်းမထဲကို အမောတကော ပြေးဝင်လာပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ အင်တာဗျူးခြင်း စတင်ပါပြီ။
ဗျူး – စိတ်ကလေးရေ မင်း ကြည့်ရတာ တော်တော်လေး မောနေပုံပဲ။ ဘယ်တွေသွားနေလို့ နောက်ကျပြီး ခုလိုတွေ မောနေရတာလဲ။ ပြောစမ်းပါဦး။
စိတ် – ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျနော်ကတော့ အမြဲလိုလို အာရုံခင်းသောလမ်းမှာ လျှောက်နေရသူမို့ ခုလည်း အာရုံတွေရဲ့ နောက်ကို လိုက်နေရင်းက ပြေးလာရ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဗျူး – ဒါဆို မင်းက ဘယ်လို အာရုံတွေနောက်ကို လိုက်တာလဲ။ ပြောစမ်း ပါဦးကွာ။
စိတ် – ကျနော်ကတော့ အဆင်းအာရုံ၊ အသံအာရုံ၊ အနံ့အာရုံ၊ အရသာအာရုံ၊ တွေ့ထိစရာ အာရုံတွေနောက်ကို လိုက်နေရပါတယ်။
ဗျူး – မင်းကွာ ကိုယ့်ဘာကိုယ် အေးအေးမနေပဲ ဘာလို့များ အဲလိုတွေနောက် လိုက်နေရတာလဲကွာ။ မမောပေဘူးလား ။ ပြောစမ်းပါဦး။
စိတ် – အင်း ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ ရှက်တော့လည်း ရှက်စရာပါပဲ ။ ကျနော်က အဆင်းလှလှလေးမြင်ရင် လိုချင်လိုက်တာပဲ။ အသံ ကောင်းကောင်းလေး လည်း ကြားချင်လိုက်ပြန်ရောဗျာ။ နောက် အနံ့မွှေးမွှေးလေးဆိုလည်း ရှုချင် ပြန်တာကိုးဗျ ။ အဲလိုပဲ အရသာကောင်းကောင်းဆိုလည်း စားလိုက်ချင်တာပါ ပဲ ။ နောက် အထိအတွေ့လေးလည်း ခံစားချင်သေးတယ်ဗျ။ အဲဒီတော့ ကျနော့မှာ ဘယ်တော့မှ အားရ နားရတယ်ကို မရှိပါဘူးဗျာ။ ဘယ်ဟာမှလည်း အလွတ်မပေးချင်ဘူးလေ။ ဒီတော့ ဒီအာရုံတွေ ခင်းပေးလိုက်တဲ့ အဆုံးမ ရှိသော ပြေးလမ်းမှာပဲ ပြေးနေရပါတယ်လေ။
ဗျူး – အော် မင်းက အဲလိုကြောင့် အလုပ်တွေ မအားဖြစ်နေရတာပေါ့နော်။ နို့ နေစမ်းပါဦး။ မင်းအဲလို လိုက်နေ ၊ ပြေးနေတော့ ဘယ်လိုခံစားရလဲ ပြောပါဦး။ ပျော်ပဲပျော်နေသလား။ မောပဲမောနေသလား ဆိုတာလေးလေ။ ဆက်စမ်း ပါဦး။
စိတ် – အင်း ပြော မပြောချင်ပါဘူးဗျာ။ ကျနော်ထင်တာက အဲလို အာရုံလေးများ ရခဲ့ရင် ပျော်ရွှင်ရလိမ့်မယ်။ ချမ်းသာရလိမ့်မယ်လို့ ထင်နေ တာလေ။ ..
ဗျူး – အင်းလေ အဲလိုမဟုတ်ဘူးလား။ (ကြားဖြတ်ပြီး ၀င်ထောက်လိုက်သည်)
စိတ် – ဘယ်ကလာ ဆရာရယ်။ ကျနော်ဖြင့် နောက်ဆုံးတော့ လိုက်ရင်း ပြေး ရင်း ဖတ်ဖတ်မောပြီး ကျန်ခဲ့ရတာပါပဲ။
ဗျူး – ဘယ်လိုလဲကွ ။ ငါ နားမလည်လို့ ရှင်းစမ်းပါဦး။
စိတ် – ဒီလိုလေ ဆရာရေ..။ ကျနော်က အဲဒီ အာရုံတွေနောက်ကို လိုက်တယ် ဆိုကတည်းက လိုချင်၊ ရချင်စိတ်နဲ့ လိုက်နေရတာကိုး။ အဲဒီတော့ လိုက်နေ ရင်းကနေလည်း ကိုယ်လိုသလိုမှ ရလာပါ့မလားရယ်လို့ တွေးပူပြီး အပူတန်း လန်းနဲ့ လိုက်နေရတာကိုးနော်။ အဲဒီတော့ ရှေ့က လောဘတဏှာရဲ့ ဦးဆောင်ရာနောက်ကို နောက်က သောကတွေ ပရပွနဲ့ လိုက်နေရမှတော့ မောရောပေါ့ဗျာ။
ဗျူး – အင်း မင်းရဲ့ဘ၀ကလည်း တော်တော်လေး စိတ်ပျက်စရာပဲနော်။ ဒါဆို မောအလကားပဲပေါ့နော့။ မင်းလိုချင်တာက သုခလေ၊ လိုက်ရင်းကနေ ရနေတာက ဒုက္ခ ဆိုတော့ ….ဟူး ..ငါတောင် မင်းအစား မောလာပြီ။ မင်းအဲလို သိရင် နောက်မလုပ်နဲ့တော့ပေါ့ကွ။ ခုက သိပြီးဆက်လုပ်နေမှတော့ ဘယ် သက်သာတော့မလဲကွာ။
စိတ် – ဆရာရယ် တကယ်တော့ ကျနော်လည်း ချမ်းသာချင်လို့ လိုက်နေတာပါ ပဲ။ ချမ်းသာလာမှာပဲလို့ မျှော်လင့်ရင်း ဆိုတော့ ရနိုး ရနိုးနဲ့ ပဲ ….ခုဆို စိတ်မှာ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေပဲ ပြည့်နေပါပြီ။
ဗျူး – အော…အဲဒါနဲ့ပဲ မင်းက ငါ့ရဲ့ “ချမ်းသာလိုသူများအတွက်သာ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ ဒီအင်တာဗျူး အစီအစဉ်မှာ ရောက်လာတာပေါ့လေ။
စိတ် – ဟုတ်…ဟုတ်..ပါ…တယ် ဆရာရယ်။ ကျနော် ဘယ်လို နေရင် ချမ်းသာ မှု အစစ်ကို ရမှာပါလဲ ဆရာ။ အမိန့်ရှိပါဦး ဆရာရယ်။
ဗျူး – ကဲ ဟုတ်ပါပြီ ။ ဒါဆိုရင်တော့ မင်း မနက်ဖြန်ကစပြီး သင်ပြပေးမယ့် ချမ်းသာရေး လမ်းညွှန် သင်တန်းကို တက်ခွင့်ရသွားပါပြီ။
စိတ် – တကယ်လားဆရာ..။ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ ဆရာရယ်။ ကျနော်က တကယ်ကို ချမ်းသာချင်လို့ပါ ဆရာရယ်။ ကျနော့ကို ပြန်ခွင့်ပြုပါဦးနော်။
သင်တန်းမှာ ဘာပို့ချလဲဆိုတာလည်း စောင့်ဖတ်ပါ့မယ်
ဒို့များ အင်တာဗျုးတုန်းက မအားလို့တဲ့ လာကို မလာဘူး.. အလုပ်များလို့ မလာဖြစ်တာနဲ့.. တခါမှကို မဗျူးရသေးဘူး
အင်း …. အင်တာဗျူးဖို့ ရက်ချိန်းယူအုန်းမှ …
မှန်ပါဘုရား …. တပည့်တော် ကွီးကလေးရဲ. စိတ်ကလေးလဲ ဒီလိုပဲမောနေရပါတရ် ဘုရား။ အဲဒီတော့ တပည့်တော်ကိုလဲ စိတ်ချမ်းသာရေး လမ်းညွှန် သင်တန်း ကိုလာတက်ခွင့်ပေးပါ ဘုန်းဘုန်း ဘုရား …
စာရေးသူက ဘုန်းဘုန်း မဟုတ်ဘူး.. မမဟူး
အော် … မမ (ဘယ်သူလဲ ဘယ်သူလဲ) (who who) လား ?
တိပါဘူး။ အာရုံခြောက်ပါးကို အင်တာဗျူးလုပ်နေတာဆိုတော့ ကွီးက ဘုန်းဘုန်းမှတ်လို.။
အင်း …. အင်တာဗျူးဖြေဖို့…….ယတယြာလေးချေအုံးမှ။
ဖတ်နေတုန်းကို မောလိုက်လာလို့ နောက်နေ့မှ သင်တန်းလာတက်တော့မယ်နော်။
ခုတော့ အရင် အင်တာဗျူးဖြေလိုက်ကြပါဦး။
အပေါ်က ဟိဟိ (ပေါင်ကားနေတဲ့ ကို့ယို့ကားယားနဲ့) ကလူသစ်တင်တယ်နော်
ချာတူးလန်.. မဟူးဟူးက စိတ်ကို အင်ဒါဗျူးခိုင်တာ ဟေမွန်ချမ်း ကို ဘူးခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူး သင်ခန်းစာ မှားနေပြီ